सोनीका भन्छिन्: पारसलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा उनले यो हुन सक्दैन भने, त्यसैले म दे’हत्याग गर्ने कोशिष पनि गरे(भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारसोनीका भन्छिन्: पारसलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा उनले यो हुन सक्दैन भने, त्यसैले म दे’हत्याग गर्ने कोशिष पनि गरे(भिडियो हेर्नुहोस्)
December 16, 2020 admin समाचार 6266
पूर्व युवराज पारससंग नजिकको सम्ब’न्ध रहेको भनिएकी युट्युवर सोनिका रोकाय फेरी एक पटक राजसं’स्थाको पक्षमा खरो उत्रिएकी छन् । उनी कोरोनाको जोखिम सुरु भएसंगै आफ्नो गृह’जिल्ला बझागं पुगेकी छन् । पछिल्लो पटक पूर्व युवराज पारस शाहसंग स’म्बन्ध वि’ग्रिएको भनिएकी सोनिकाले त्यो भनाईलाई ग’लत सावित गरिदिएकी छन् ।
पारस विरामी भएको समाचार सार्व’जनिक भएपछि निकै भावुक भएकी सोनिकाले फेरी एक पटक राज’नीति कुरा गरेकी छन् । उनले पारसका बारेमा निकै ब’खान गरेकी छन् । उनले राजतन्त्र नै सकिएपछि उनका बारेमा नकारा’त्मक कुरा नगर्न आ’ग्रह गरेकी छन् । उनले पारसलाई बुझ्न सबैसंग आग्र’ह गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘उहाँ पागल भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेकी छु । त्यत्रो रा’जसंस्था जाँदा उनमा के बितेको थियो होला ? कुनै मानिस प्रेममा धोका खाँदा त कति दुखी हुन्छ भने त्यती धेरै वर्ष राज गरेको राज’तन्त्र जाँदा कस्तो भयो होला ? तर त्यो भा’वना कसैले बुझेन ।’
उनले राजाका छोरा वि’ग्रेको भनेर भन्न न’मिल्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्यही राजाको छोरा हो जसले मलाई राम्रो बा’टोमा हिड्न सिकायो ।’ उनले पारससंग आफ्नो कुनै त्यस्तो नराम्रो स’म्बन्ध नभएको बताएकी छन् । मेरो हरेक पटक हिमानी शाहसंग भेट’हुँदा सौहार्द पुर्ण भएको बताएकी छन् । उनले आफुले पारसको अवस्था’ देखेर उनको निकै ख्याल गरेको बताइन् ।- इताजा खबरबाट
अर्जुन सापकोटाको ‘नगर पिर माया’मा अन्जली र बिमल (भिडियो हेर्नुहोस्)
मेरी बास्सैका सुरज चापागाई (बान्द्रे) को बटै तथा टर्की फर्म, करोडौंको लगानी (भिडियो सहित)
December 28, 2020 admin समाचार 7784
गरे के हुँदैन र ? भन्ने उखा’नलाई मेरी बास्सैका बान्द्रेले साबित गरि’दिएका छन् । बान्द्रेलाई नचिन्ने सा’यदै होलान् । उनै हास्य कलाकार बान्द्रे यतिबेला बट्टै तथा टर्कीको व्या’वसाय गरिरहेका छन् । उनले यो व्यावसायमा करोडौंको
June 8, 2021 admin समाचार 3238
June 15, 2021 admin समाचार 3280